Frenchton: Tilmaamaha Milkiilaha Faransiiska Bulldog & Boston Terrier Mix - Taranka
Frenchton: Tilmaamaha Milkiilaha Faransiiska Bulldog & Boston Terrier Mix
Jidka naqshadeeye ee jilicsan ee u dhexeeya French Bulldog iyo Boston Terrier, oo badanaa loo yaqaan Frenchton, ayaa loo sameeyay si loo yareeyo qaar ka mid ah arrimaha caafimaadka ee caanka ah ee ku saabsan aabbaha.
Isaga oo aan ka dheereyn 16 ”dherer ahaan Frenchton waxaa si fudud lagu garan karaa madaxa wareegaya, wejiga fidsan iyo sanka sanka ka qaba.
Wuxuu caan ku yahay rabitaankiisa inuu ku farxo oo jeclaado salaaxida. Marka lagu daro ruuxiisa sare, tani waxay ka dhigeysaa isaga xulasho caan ah kuwa raadinaya eey qoys oo daacad ah.
Cabbirkiisa yar wuxuu ka dhigayaa xulasho ku habboon dadka magaalada deggan iyo si siman, markii si sax ah loo dhexgalo, wuxuu ku naaloodaa qoysaska mashquulka badan.
Miyaad xiiseyneysaa inaad lahaato xoogaa caqli yar oo caqli badan? Sii wad aqrinta hagaha milkiilahaaga si aad waxbadan uga barato.
Frenchton Dog Info & Shaxda Xaqiiqda
Ujeedo Naqshadeeyaha Eyga / Wehelnimada
Ku Haboon Dhammaan
Cabir 14 ilaa 16 ”(lab iyo dhaddig)
Miisaanka 15 illaa 25 rodol (ragga caadi ahaan way culus yihiin)
Nolosha qofka 8 ilaa 15 sano
Kala duwanaanta Midabka Madow, guduud, madow iyo caddaan, bunni, dahab iyo kareem
Dabeecad Diyaar u ah inuu ka farxiyo, daacad ah, firfircoon, ciyaar badan, caqli badan
Jimicsi Maalinle ah Dhexdhexaad - Laga bilaabo 30 illaa 60 daqiiqo oo jimicsi maalinle ah
Isticmaalka Cuntada Maalinlaha ah 300 ilaa 500 kaloori (maalin kasta) oo ku saleysan miisaanka jirkooda
Arimaha Caafimaadka ee Layaqaan Arrimaha neefsashada, buurnida iyo awood la'aanta u dulqaadashada cimilada daran
Waa maxay Frenchton? Dulmarka Guud
Asalka Faransiiska Bulldog
Asalka Boston Terrier
Sida loo Daryeelo Frenchton
Jimicsi ku sameeya Frenchton
Muuqaalka Frenchton: Koodhka, Midabka iyo Qurxinta
Sida eeyaha wax naqshadeeya oo dhan, eyga Frenchton maahan mid saafi ah.
Frenchton waa nooc iskutallaab ah oo naqshadeeye u dhexeeya Bulldog Faransiis saafi ah iyo Boston Terrier.
Layaab maleh hidaha dowladeed ee Boston Terrier, Frenchton ayaa dhab ahaantii asal ahaan ka soo jeeda Mareykanka 1990-yadii. Ma ahayn illaa iyo 2009 inay noqdeen nooc la aqoonsan yahay oo ay ka heleen Ururka Canine Association naqshadeeye ee Caalamiga ah.
Waxaa la rumeysan yahay in loo soo saaray si looga fogaado qaar ka mid ah arrimaha caafimaadka guud ee laga helo aabaha waalidka, gaar ahaan arrimaha neefsashada ee Faransiiska Bulldog (Frenchie).
Sababtaas awgeed, waxaad ogaan doontaa inuu yeeshay sanka ka dheer waalidkiis Frenchie. Tan kaliya maahan, iyadoo loo hayo daacadnimo caan ah labada Frenchie iyo Boston Terrier, waxaa la siiyay in isku dhafka nashqadeeyayaasha uu noqon doono wehel weyn (ka sii akhri arrintan qaybta dabeecadda ).
Iskudarka Faransiiska Bulldog & Boston Terrier Mix wuxuu leeyahay cimri ahaan 8 ilaa 15 sano.
Wuxuu amrayaa qiime-u dhexeeya $ 500 - $ 3,500 oo badanaa la xiriira waalidka Frenchie. Sida had iyo jeer sameyso cilmi baaristaada iyo hel raadiye sumcad leh .
Ey yar oo cabbiraya inta u dhaxeysa 14-16 ”oo dherer ah iyo meel u dhexeysa 15 ilaa 25 rodol.
Mid ka mid ah bakhaarradan cayaarta leh waa inaad ka filataa inaad ku bixiso meel kasta oo u dhexeysa $ 500 iyo $ 3,500 eey kasta. Qiimaha sare awgiis, milkiilayaashu mararka qaarkood way eegaan korsashada eyda Frenchton .
Qiimaha qiimaha qaaliga ah badanaa waxaa u mahadceliya waalidka Frenchie maxaa yeelay waxay si gaar ah ugu adag yihiin taranka sababo la xiriira miskahooda yar. Bulldogs-ka Faransiiska badanaa si dabiici ah ayaa loo farsameeyay oo dhalmada dabiiciga ah way adagtahay iyadoo eeyo badan ay ku dhashaan qalliinka. Nidaamyadani dhammaantood waxay ku yimaadaan kharash, qashinkuna inta badan wuu yar yahay taas oo mar kale riixaysa qiimaha eey yar.
Isagoo ka hadlaya durriyada waalidka, aynu fiirino iyaga si yar oo faahfaahsan.
Asal ahaan UK , Bulldog-ga Faransiiska ayaa raalli ka noqday kuwa sameeya xargaha magaalada Nottingham. Intii lagu guda jiray sarajooggii kacaankii Warshadaha, warshadaha xargaha ayaa loo hanjabay, kuwa sameeya badan ayaa dib u dejiyay Faransiiska, dabcan, waxay qaateen eeyahoodii. Nooca ayaa sii waday, badiyaa waxaa lagu soo tallaabayaa jaranjarooyin iyo khaanado Intii aad jidka ku jirtay, ka hor intaan la ogaan Marwooyinka reer Paris . Frenchies waxaa lagu sharraxay cabirkooda yar, oo ku habboon nolosha magaalada, muddo dheerna, waxay isku arkeen biyaha dhexdooda Gobollada.
Loogu jeclaa dabeecadooda kalgacalka leh , Frenchies waa socod fudud, bulsheed iyo isboorti. Waxay la jaan qaadayaan qoys kasta, waxay ku fiican yihiin carruurta iyo, markay bulsheed da 'yar, u dulqaataan xayawaanka kale gaar ahaan si fiican.
Ka gudbeen Bulldog iyo Terrier wuxuu ahaa eey la yiraahdo Garsoore .
Thanks to kuwa dhiiga jecel ee Brits, waxaan leenahay Boston Terrier.
1800-yadii, Xaakimkii, kii ugu horreeyay ee Boston Terrier ahaa, wuxuu helay waddadiisii ​​uu kula socon lahaa William O'Brien. Garsooraha wuxuu ahaa asalka Boston Terrier. Magaalo ayaa loogu magac daray, halkaas ayaa Boston Terrier ku nooshahay.
Qofnimo iyo ruuxi ka buuxo, ninkan yar ee caqliga badan ayaa ku faraxsan uun inuu dadkiisa la joogo. Mid kale oo adag oo dhinac walba leh, layaab malahan inaan helno dad noocaas ah, saxafi bulsheed markaan ka gudubno Boston Terrier Frenchie.
Tani nin yar oo bulsheed ah waxay ku habboon tahay qoysaska badankood. Waxay ku barwaaqoobaan carruurta, lammaanaha, kali kali iyo jimicsigooda hooseeya awgood waxayna sidoo kale ku habboon yihiin hawlgabka oo doonaya kaliya qashin leh xoogaa shakhsiyad ah.
Lama yaqaan ciyo, nimankani runtii waxay ku habboon yihiin nolosha guryaha. Deriskaagu si dhib yar ayey ku ogaan doonaan inaad eey leedahay. Buuqda ugu badan ee aad ka maqli doontid waa goorta ay hurdaan. Way khuureen, cod dheer!
Sababtoo ah bulldogooda iyo dhaxalkooda dabiiciga ah, raggaani waa kuwo aad u sarreeya, laakiin waxay leeyihiin waqti aamusnaan sidoo kale. Socod ku wareegsan dhismaha iyo xoogaa fadhiyo tababar ah; faranjiintiina waxaa lagu soo laaban doonaa kursiga fadhiga.
Runtii iyagu waa eeyga ugu daacadsan ee aad jeceshahay inaad la kulanto maaddaama ay yihiin dad dabiici ah oo ka farxiya! Isku dar tan caqligooda iyo caruurtu way awoodaan bar khiyaano ama labo .
Markii la dhexgalay da 'yar, Frenchton waxay u dulqaadaneysaa xayawaanka kale ee guriga ku jira - kaliya xusuusnow dhaxalka awowgood; qaar baa ku dhici kara eeyo aysan aqoon.
Jacaylka ay dadka u qabaan macnaheedu waa in aysan u dulqaadanayn in keligood la daayo muddo dheer. Waxay noqon karaan kuwo dhib badan oo wax dumiya. Raadi socod-yaqaan eey caan ah oo xaafadda ah, ama xanaanada-dayga, haddii aad ogtahay inaad u baahan tahay inaad uga tagto guriga keligiis.
Dad dib loo dhigay dib loo dhigay Aynu eegno faahfaahin dheeri ah waxa ay u baahan tahay si loogu daryeelo isaga hagaha daryeelkayaga hoos ku xusan.
Bulldog Faransiis ah (bidix) iyo Boston Terrier (midig) waxay u egyihiin cabbir ahaan, muuqaal ahaan iyo daryeel ahaanba.
Sidaad filan lahayd, cabirkiisa yar macnaheedu waa in cuntadiisu ay yar yihiin.
Celcelis ahaan, Faransiiskaaga ayaa cuni doona qiyaastii 20 kaloori halkii rodol oo culeyska jirka ah maalintii. Marka haddii uu culeyskiisu gaarayo 18 rodol, waxaad quudin doontaa qiyaastii 360 kaloori maalintii.
Tani badanaa waa inay ka timaad a cunto tayo sare leh , hubinta inay sidoo kale buuxinayso dufankiisa iyo shuruudaha maalin kasta.
Barootiintu waxay muhiim u tahay shaqada unugyada iyo hagaajinta dufankuna waa u muhiim tamarta; taas oo runtii muhiim u ah ninkan yar ee ciyaarta badan; wuxuu ubaahan doonaa ugu yaraan kudhowaad 18% cuntadiisa borotiin iyo 5% dufanka.
Akhri calaamadda cuntadiisa si loo hubiyo inaad buuxineyso shuruudaha nafaqada.
Kaloriinta kale waxay ka imaan karaan daaweyn ama cunto fudud maalintii oo dhan, laga yaabee xoogaa miro cusub.
Eeyadan ayaa kala ah u nugul buurnida markaa hubi inaad kormeerto inta jeer ee daweynta iyo cunnada fudud ay cunaan. Had iyo jeer waad beddeli kartaa qaar ka mid ah gunnadiisa waqtiga cuntada si loogu helo cunto fudud iyo tababar.
Kaliya maahan daawashada kalooriyadiisu inay muhiim u tahay maareynta culeyska - sidoo kale jimicsiga ayaa muhiim ah.
Ha u oggolaan in cabbirkiisa yar uu ku khiyaaneeyo, qashin-baxa firfircoon ayaa jecel socodkiisa:
Socodka degdega ah ee hareeraha dhismaha waa qumman yihiin
Socodka dheer ee lagu maro baarkinka eeyga waa mid xiiso leh
Mar kasta oo aad jimicsi ku sameysid isku darkaaga, ka feker arrimaha neefsashada ee qaar ka mid ah Faransiisyaashu u nugul yihiin. U fiirso mid kasta neefsashada oo adkaata marka aad dibadda u baxayso oo ha ku badin markay kululaato. Noocyada Brachy ayaa sameeya halgan ugu jiraan sidii ay isu qaboojin lahaayeen cimilada kulul.
Dabeecadooda saaxiibtinimo waxay ka dhigan tahay inay wax baarayaan, sababtaas awgeed waxay u badan tahay inay ugu nabadgelyo badan tahay in lagu hayo xarig markii ay lugeynayaan. Waxaa laga yaabaa inay ku hayaan qaar ka mid ah madax adayga waalidkood Frenchie oo ay doorteen inay iska indhatiraan haddii qof ama wax kale ka xiiso badan yihiin.
Sidii aan soo sheegnay, Frenchton, sida dhammaan noocyada geesinimada leh, waxay la halgamayaan cimilada diiran. Iyagu si gaar ah uma dulqaataan qabow sidoo kale. Koodhadhkooda gaaban ayaa ka dhigan inay qabowgayaan. Waxaad badanaa arki doontaa iyagoo ruxaya funaanad markay socod ku socdaan.
Dulqaadan la'aanta cimilada xad dhaafka ah waxay macnaheedu noqon kartaa inaad socod gaaban ku jirto oo aad waqti badan ku qaadato gudaha, halkaas oo kululaynta ama hawo-ku-taalku yaalo. Laakiin ha ka welwelin - caqligooda ayaa ka dhigaya iyaga musharraxiin heer sare ah oo loogu talagalay cayaaraha maskaxda (fiiri qaar ka mid ah talooyinka cayaarahayaga hoose).
Waqtiga dheeriga ah ee aad guriga kula qaadan karto saxaabadaada waa fursad fiican oo aad kaga shaqeyn karto tababarkiisa.
Sida eeyaha oo dhan, waxay sida ugu fiican uga jawaabaan xoojinta wanaagsan iyo abaalmarinta tababarka ku saleysan. Eeyadu waxay wax ku bartaan qaboojiyaha hawl wadeenka - waxay u badan tahay inay ku celiyaan dabeecad haddii ay soo saarto cawaaqib wanaagsan waxayna u badan tahay inay iska ilaaliso dabeecad haddii ay soo saarto cawaaqib xumo.
Sida carruurta oo kale, markuu muujiyo dabeecad la doonayo - ammaan oo u abaal mari. Dabeecad aan loo baahnayn? Iska indha ama dib u hag dhaqankiisa haddii loo baahdo. Weydiiso inuu fuliyo dhaqanka la doorbiday oo ku abaalmari inuu sidaas sameeyo. Abaal marintu waxay noqon kartaa ammaan, fiiro gaar ah, ciyaaro ama cunto.
Faransiisyaashu waxay mararka qaarkood ka dhaxli karaan taxaddarka adag ee adag ee waalidkood Frenchie, sidaa darteed tababbarku wuxuu u baahan karaa uun adkeysi yar Si kastaba ha noqotee, guud ahaan, rabitaankooda ah inay ku farxaan waxay ka dhigan tahay inay fiicnaadeen markay carruurtu rabaan inay baraan xeelad.
Waxaad ku bilaabi kartaa adoo wax baraya 'rogrog!':
Mid baa Frenchton kaaga og hoos amar - weydiiso inuu jiifo 'jiif'
Adiga oo ku haysta daaweyn sankiisa, si tartiib ah ugu dhaqaaji dhanka garabkiisa sidaa darteed waa inuu madaxiisa la yimaadaa si uu u ursado.
Markuu raaco daaweynta, u keen daaweynta gadaashiisa gadaashiisa markaa waa inuu rogrogaa si loo helo. Daawee!
Markuu si dhakhso leh ula socdo daaweynta, ku dar amarka 'rogo' si aad u calaamadeyso dabeecadda.
Qaarkood waxay ka taxaddaraan eeyaha Frenchton ee leh carruurta waalidkood Frenchie awgood. Markii la dhexgalay da 'yar, Faransiisku waxay jecel yihiin ka mid noqoshada qoyska, carruurta ayaa lagu daray. Laakiin, waxay u baahan yihiin in loo soo bandhigo waxa adduunku bixiyo, hab aamin ah oo kontoroolo ee ka soo baxa eeyaha.
Eeyadu waxay bartaan waxa laga baqo iyo waxa la aqbalo; waxay u baahan yihiin waayo-aragnimo togan si ay u ogaadaan inay wax aamin yihiin. Fiiri liistada hubinta bulshada si aad u bilowdo.
Waan ognahay in, in kasta oo rajo laga qabo in laga soo saaro noocyada tabashooyinka caafimaad ee ku jira aabbaha waalidnimada ah, Faransiiska haddana wali waxa ku dhaca dhibaatooyin caafimaad oo yar.
Arrimaha neefsashada - isagoo ah nooca loo yaqaan 'brachycephalic breed', Frenchton waxaa loo yaqaanaa inuu la xanuunsanayo Brachycephalic Airway Syndrome. Kani waa erey dallad ah oo loogu talagalay noocyo kaladuwan oo aan caadi ahayn oo ay ku jiraan naasaha stenotic, dhererka jilicsan ee dheereeya, trachea hypoplastic iyo walxaha lakabka laryngeal. Nooc xamaasad leh ayaa ku xanuunsan kara mid ama dhammaan kuwan. Marka la soo koobo, waxay keenaan dhibaatooyin neefsashada ah.
Cayilka xad dhaafka ah - sida waalidkood Frenchie waxay u fududaan karaan cayillan. Cayilku wuxuu gacan ka geystaa xaalado caafimaad oo kala duwan oo saameeya xubnaha, lafaha iyo kala-goysyada iyo ugu dambeyn nolosha eyga. Sidaan soo sheegnay, la socoshada cunnada ayaa fure u ah hubinta eygaaga inuu leeyahay jimicsi maalinle ah.
Awood la'aanta in loo dulqaato cimilada xad dhaafka ah - qaab dhismeedka jirkooda iyo jaakad gaagaaban awgood, Frenchtonton waxay la halgamayaan cimilada kulul iyo kuwa qabow labadaba. Qaab dhismeedkooda geesinimada leh micnaheedu waa inay jiran yihiin oo u qalabaysan yihiin inay kuleylka naftooda ku qaboojiyaan oo jaakadoodu gaaban tahay ma siiso wax badan oo kuleyl ah dhaxanta. Cimilo dhexdhexaad ah ayaa ugu fiican ama guri aad kaga dhuuman karto waxyaabaha jira marka loo baahdo.
Eyga loo yaqaan Frenchton eey ayaa loo kala saaraa inuu yahay eey yar oo cabiraya 14-16 ”oo u engegaya miisaankiisuna yahay 15 ilaa 25 rodol.
Frenctons waxaa badanaa lagu arkaa sankooda oo waxoogaa ka dheer Frenchie, laakiin wali waxay leeyihiin 'dhegaha fiidmeerta'.
Waxay sidoo kale lumiyeen indhahii qulqulayey ee ka imanayay Boston Terrier, taas oo macnaheedu yahay arrimaha indhaha dhib yar.
Wareeg wareegsan, fidsan oo leh sanka oo sanqadha ah iyo dhego kacsan, Frenchton waxay leedahay midabbo kala duwan. Waxaad arki doontaa iyaga madow, bir, madow iyo caddaan, bunni, kareem iyo dahab.
Eygan ayaa leh jaakad yar oo xariir ah oo si aan caadi ahayn u daadisa. Aroosku waa hawl fudud , Mindiga qurxinta timaha hal mar ama laba jeer usbuucii ayaa ka saari doonta wixii timo dhintay ah waxayna sii heyn doontaa jaakada xariirta ah. Waxay sidoo kale yar yihiin oo ku filan inay ku soo baxaan qubeyska, wata shaambo eyga ah , haddii ay ku samayn lahaayeen kor u kaca.
Dhegahooda kacsan, waxay u baahan yihiin nadiifin joogto ah. Suufyada suufka leh ee lagu daaweeyo jeermiska ka hortagga bakteeriyada ugu yaraan toddobaadle ayaa caafimaadka u ilaalin doona. Intaad kujirto, isticmaal nadiifin indho jilicsan si aad u ilaaliso kuwa eyda eyda ah eey nadiif yihiin. In kasta oo aanad lahayn indho gaar ah oo bullanaya, wasakhaynta ilmada waxay noqon kartaa arrin sida dheecaanku uga soo bixi karo indhaha oo ku qallalaya meertada xabka. Haddii mid ka mid ah arrimahan ay noqdaan dhibaato, la tasho dhakhtarkaaga xoolaha.
The Frenchton, oo loo soo barbaariyay inuu noqdo wehel buuxa oo magaalo ah, ma istaago wax ka yar 16 ”cabir ahaan wuxuuna xambaarsan yahay xamaasad iyo firfircooni firfircoon!
Ku habboon qoysaska badankood, markii ay ka dhexeeyaan eey, waa ninka ugu saaxiibka badan ee aad la kulmi doonto.
Caan kuma aha ciyo, deriskaaga ayaa si dhib yar u ogaan doona inaad leedahay eey. U nuglaanta buurnida, milkiilayaashu waa inay ka fekeraan cunnadooda oo ay hubiyaan inay si joogto ah u jimicsadaan.
Haddii cimiladu aysan fiicnayn, ka shaqee xoogaa maskax kicinta guriga ah; rabitaankooda ah inay ka farxiyaan iyo sirdoonka ayaa ka dhigaysa iyaga musharixiin dhammaystiran Waxaa jira suurtagalnimada inay ku sii hayaan xarig adag oo ka yimaada waalidkood Frenchie, laakiin tani maahan wax xoogaa adkeysi ah oo aan wax ka qaban doonin.
Guud ahaaneed oo leh tababar hore iyo is dhexgal bulsho; Saaxiibtinimada, ciyaarta iyo socodka-faransiiska waa mid ku habboon qoyska. Noosoo sheeg khibradahaaga qaybta faallooyinka ee hoose.
Saluki: Eyga Boqortooyada ee Masar
pitbull sanka buluuga ah magacyada lab
ingiriisiga kareemka dahabiga ah ee daadinta